लकडाउनको विकल्प खोजौंः अध्यक्ष श्रेष्ठ - Everest Dainik - News from Nepal
लकडाउनको विकल्प खोजौंः अध्यक्ष श्रेष्ठ
२०७७, २७ भाद्र शनिबार
दाङः कोभिड–१९ का कारणले लामो समय देखि विश्व त्रसित छ । लम्बिदो लकडाउनले गरिखाने वर्ग मारमा परेका छन् । ‘दिनभर पसिनाको खोलो बगाउने र बेलुका चुलो बालेर हातमुख जोड्ने मजदुरहरुको मर्म कसले बुझिदिने ? भन्ने विषयमा राज्यको गम्भिर्यता पटक्कै नदेखिएको गुनसो समाजमा छरपस्ट बनेको छ । जसरी लकडाउनको अवधि थपिँदै गएको छ, उसैगरी विरोधका लप्काहरू पनि बढ्दो अवस्थामा छन् ।
याे पनि पढ्नुस चाँडै नै लकडाउनको मोडालिटी तयार हुन्छः उद्योगमन्त्री भट्ट
निरन्तर बढिरहेको लकडाउन र आफ्नो दैनिक पेशामा लागेको मन्दिले अब नागरिकस्तरबाटै थपिँदो लकडाउन विरुद्धका स्वरहरु गुञ्जिन थालेका छन् । कोरोना भाइरसबारेको यथार्थता कम र हल्ला बढिले पुर्णतया गरिखाने वर्गलाई गहिरो मर्का परेको सामजिक अगुवाहरुको प्रतिक्रिया छ ।
यता, विभिन्न उद्योग–व्यवसायीहरुले पनि राज्यको यो उदारीकरणको विरोध जनाइ रहेका छन् । दाङको देउखुरी उद्योग बाणिज्य संघ लमहीका अध्यक्ष रत्न प्रसाद श्रेष्ठले सरकारलाई अब लकडाउनको विकल्प खोज्न र जनजीवन सामान्य बनाउन आग्रह गरे । सञ्चारकर्मी माझ प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले यो अवस्थालाई सहज नबनाए आम जनता बिद्रोह गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।
याे पनि पढ्नुस लकडाउन: आफन्तलाई पनि प्रवेश निषेध, अर्को वडामा जान रोक !
स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरेर व्यापार र यातायात खोल्नुको विकल्प नरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ । उनले भने, ‘भोलि सरकारले विरोध थेग्न सक्दैन । त्यसैले बेलैमा सोच विचार गरोस् ।’
लकडाउन सुरु भएलगत्तै तछाड–मछ्डा गर्दै राहतको कुम्लो बोकेर गाउँ पसेका स्थानीय तह, लगायतका विभिन्न निकायहरु अहिले बेखबर रहेको गुनासो बढेको छ ।
याे पनि पढ्नुस भारतमा कोरोनाको नयाँ रेकर्ड
ट्याग्स: कोभिड–१९, देउखुरी उद्योग बाणिज्य संघ, रत्न प्रसाद श्रेष्ठ, लकडाउन